Banyere Anyị - Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd.
Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd. bụ High na New Tech. Enterprise, ekpuchi na 15,000 sq mita osisi, emi odude ke Langxi ulo oru ogige, nkwụsị nke Anhui, Zhejiang na Jiangsu n'ógbè, na-ekpori ndụ adaba ohere isi njem netwọk. Anyị factory iwekota emebe, na-eme nnyocha, ahịa na ngwa nke osisi plastic mejupụtara ihe na mmepụta.
Anyị nwere 24 mmepụta edoghi na kwa afọ mmepụta nke 20,000 tọn, nke na-ekwe nkwa mụ na-adọ ngwaahịa kpọbata.Our isi ngwaahịa na-agụnye: WPC decking, WPC mgbidi cladding, WPC nsu, WPC handrail, WPC pergola, WPC ifuru ite na WPC bench na Pavilion. A na-arụ ụdị ihe dị iche iche na usoro QC siri ike.
Anyị nwere ndị otu QC ndị nwere ihe karịrị afọ atọ na ngalaba. A na-enyocha ngwaahịa ndị ahụ na usoro ọ bụla. Partyfọdụ n’ime ha na-anwale nke ndị ọzọ. Ọzọkwa anyị na-ewebata ERP nwere ọgụgụ isi mma akara na mmepụta usoro. Ihe niile doro anya ma na-achịkwa site n'otu nzọụkwụ gaa na ọzọ. Imirikiti anyị bụ ndị ọrụ mpaghara, ha na-arụ ọrụ ebe a ọtụtụ afọ na ahụmịhe nrụpụta ka mma. Main engineer na-arụ ọrụ na composites n'ihi na ihe karịrị 10 afọ.
Anyị nwere ndị ahịa maka ụlọ ahịa na ụlọ ahịa na mba ofesi. Anyị na-etinye uche na ahịa, ngwaahịa na teknụzụ ọhụrụ, na-agbanwe ma na-anwale na teknụzụ ọhụrụ na ngwaahịa ọhụrụ. Anyị nwere ndị ọrụ na-eto eto na ndị dị ike na nzaghachi ngwa ngwa na ezigbo nkwurịta okwu.
Ndị ahịa anyị si Europe, North America, South America, Africa, Middle East na Asia. SGS ejirila SGS nwere EU WPC ejiri njikwa ọkọlọtọ EN15534-2004 nwalere Lihua ngwaahịa, ọkọlọtọ ọkụ ọkụ EU na ọkwa ọkụ B na ọkwa US WPC ASTM. Ọzọkwa anyị na-gbaara na IS09001-2008 Quality Management System, ISO14001: 2004 Environmental Management System, FSC na PEFC. Mmadụ Bịa na ileta anyị factory.
Uru:Ngwaahịa anyị nwere ezigbo mma yana kredit ịhapụ anyị ka anyị nwee ike ịhazi ọtụtụ ngalaba alaka ụlọ ọrụ na ndị na - ekesa mba anyị.
Teknụzụ:Anyị na-anọgide na-akpa àgwà nke ngwaahịa na-achịkwa nditịm na-amị Filiks, mere ka imewe nke niile ụdị.
Ọrụ:Ma ọ bụ ire ere ma ọ bụ mgbe erechara, anyị ga-enye gị ọrụ kachasị mma iji mee ka ị mara ma jiri ngwaahịa anyị ngwa ngwa.
Ebumnuche e kere eke:Companylọ ọrụ ahụ na-eji sistemụ atumatu dị elu yana ojiji nke njikwa njikwa njikwa mba ụwa ISO9001 2000.
Ezigbo mma:The ụlọ ọrụ specializes na-amị elu-arụmọrụ akụrụngwa, ike oru ike, ike mmepe ike, ezi oru ọrụ.
Ike oru otu:Anyị nwere ike oru otu na ụlọ ọrụ, ọtụtụ iri afọ nke ọkachamara ahụmahụ, magburu onwe imewe larịị, na-eke a elu-edu elu-arụmọrụ nwere ọgụgụ isi akụrụngwa.
N'èzí WPC decking, WPC mejupụtara decking, WPC n'èzí decking, WPC ụlọ, WPC decking n'ala, osisi plastic mejupụtara decking,